Margarekha प्रधानमन्त्री ओलीकाे देशवासीको नाममा सम्बोधन – Margarekha
प्रधानमन्त्री ओलीकाे देशवासीको नाममा सम्बोधन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बिहिबार एक वर्ष पूरा गर्‍यो। ओलीले सिंहदरबारबाट देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै आगामी वर्ष उपलब्धिको वर्ष हुने बताए। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारको उपलब्धि मन्त्रालयगत रूपले प्रस्तुत गरे। सँगैसँगै उनले सरकारप्रति उठेका प्रश्नमा ठट्टा समेत गरे। आलोचकहरूलाई जवाफ दिने प्रयास गरे।
पढ्नुस्, प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनका बीस बुँदा
१) बलियो सरकार छ, उत्साहित हुनुपर्ने हैन?
जटिल निर्वाचन प्रणाली हुँदाहुँदै पनि, अढाई दशकपछि बल्ल एउटै पार्टीको बलियो सरकार निर्माण भएको छ। राजनीतिक संक्रमणकालको गोलचक्कर अन्त्य भएर स्थिरता कायम भएको छ। यसबाट अल्पकालीन प्रतिफल दिने कार्यमा मात्र केन्द्रित नभएर दीर्घकालीन विकास योजना सञ्चालन गर्न बलियो आधार तयार भएको छ। यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुँदा खिन्न हुनुभन्दा उत्साहित हुनुपर्ने हैन र ?
२) लोकतन्त्र जीविका चलाउने व्यवसाय हैन
जनतालाई सबै हिसावमा सार्वभौम तुल्याउने र उनीहरूलाई सबल बनाउने हाम्रो अभियानबाट ध्यान बराल्न ‘लोकतन्त्र खुम्चिन थाल्यो, अधिनायकवाद आयो’ भन्ने अफवाह फैलाइँदै छ। फैलिँदो र फैलिएको परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई खुम्चिएको देख्नु आश्चर्य लाग्दो दृष्टिदोष हो। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, लोकतन्त्र हाम्रा लागि आदर्श हो, थितियुक्त, सुसंगत र परिष्कृत व्यवस्था हो– जिविका चलाउने व्यवसाय हैन।
३) जग बसाल्न अवरोध गर्नेहरूले नै ‘खै घर बनाएको’ भनेर गरे प्रश्न
जग खन्दा तल्ला र छानाको परिकल्पना त गरिन्छ। तर कसैले जगलाई नै हेरेर खै त चोटा/कोठा, खै छाना भन्यो भने कसको के लाग्छ? मैदान सम्याउन र जग बसाल्न अवरोध गर्नेहरुले नै ‘खै घर बनाएको’ भनेर गरिएका प्रश्नलाई अहिले हामी सामना गरिरहेका छौं। यस्ता प्रश्नमा प्रतिक्रिया किन दिउँ भन्ने म ठान्दछु ।
४) कर्मचारी समायोजन सकिन लाग्यो
अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदले संघीयता कार्यन्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको काम बढी प्राविधिक विषय हो। तर यस अवधिमा त्यो कार्यान्वयन भइसकेको छ। जटिल मानिएको कर्मचारी समायोजनको अधिकांश कार्य सम्पन्न भएको छ ।
५) संविधानमा लेखिएका कुरा ‘….यो त भन्ने कुरा न हो’ भनेजस्तो हैन
संविधानमा लेखिएका कुराहरु एउटा गीत ‘….यो त भन्ने कुरा न हो’ भनेजस्तो हैन, गर्ने कुरा हो भन्ने विश्वास जनतामा जगाउनु मेरो कर्तव्य थियो। त्यसैले मेरो नेतृत्वको सरकारले सरदर ५ दिनमा एउटा विधेयक मस्यौदा गरी त्यो लक्ष्यलाई पूरा गर्‍यो। अहिले, मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी १६ कानुन निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएका छन्।
६) लगानी अनुकूल वातावरण
ऊर्जा उत्पादन र प्रशारणका ठूला परियोजनाहरू निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरी लगानी अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सरकार क्रियाशील रहेको छ।
७) सरकारले गरेका प्रगतिले पोल्यो
गत पुस २२ गते प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दा मैले केही तथ्याङ्क उल्लेख गरेको थिएँ। मेरा भनाईलाई अङ्कमा हैन भावमा सुन्न रुचाउनेहरूले ‘प्रधानमन्त्रीले तथ्याङ्क’ बोल्ने भन्दै प्रश्न गर्नु भयो । जसलाई सरकारले गरेका प्रगतिले पोल्यो, उनीहरूले त्यसलाई ‘मिथ्याङ्क’को रूपमा होहल्ला गरे। यस्तो सुनिन्थ्यो, नेपाल भन्ने एउटा यस्तो मुलुक छ, जहाँका जनताको नियति भनेकै बिग्रेको, भत्केको, उजाडिएको सुन्नु हो। यो मुलुकमा प्रगतिको अङ्क बोल्ने ? त्यो त तथ्याङ्क नै हैन, मिथ्याङ्क हो … ।
८) ‘ल्हासामा सुन छ कान मेरो बुच्चै’
हाम्रो खनिज क्षमताको चर्चा गरिरहँदा एकजना हितैषीले भन्नु भयो– ‘ल्हासामा सुन छ कान मेरो बुच्चै’, भाषणले हुन्छ? हो, भाषणले मात्र हुँदैन। गर्नुपर्छ। गर्न तयार हुनुपर्छ। नगर्नेका लागि केही पनि हुँदैन, गर्नेका लागि आँखाले नदेख्ने हावा पनि आम्दानीको रूपमा उपस्थित हुन्छ।
९) म जेलाई आधा भरी भनिरहेको छु, प्रश्नकर्ताहरू त्यसैलाई आधा खाली भनिरहेका छन्
एकजना शुभचिन्तकले गर्नु भएको प्रश्न याद आइरहेको छ– तपाईंलाई सुन्दा मुलुकमा केही भइरहेको महशुस हुन्छ। तर तपाईंले जे भनिरहनु भएको छ नि, हो त्यसलाई अरुहरूले किन पत्याइरहेका छैनन् त? प्रश्न गहिरो हो। अरु भनेका को र कस्ता हुन् मैले जिज्ञासा राखिनँ। एउटा प्रतिप्रश्न गरेँ– खाली भाँडो थियो, त्यसलाई मैले आधा भरेँ। म जेलाई आधा भरी भनिरहेको छु, प्रश्नकर्ताहरू त्यसैलाई आधा खाली भनिरहेका छन् त कसरी स्पष्ट पारौं?
१०) ९/९ महिनामा नयाँ सरकार हेर्ने बानी फेरौं
हाम्रो एउटा अनौठो बानी छ, ९/९ महिनामा नयाँ सरकार हेर्ने। सरकार बनेको ३ महिना चुप लाग्ने, अर्को तीन महिना खै त काम भन्ने र ९ औं महिनामा सरकार फाल्ने। यस्तो बानी परेका हामीहरूलाई सरकारले कामै गरेर एक बर्ष कटायो भन्दा पनि अनौठो लागेको हुनसक्छ भन्ने म अनुमान गर्न सक्दछु। आज जे/जे प्रश्नहरू म सुनिरहेको छु, ती ‘नौ–महिने’ अनुभवमा आधारित प्रश्नका सार पो हुन् कि? यदि यस्तै हो भने– विनम्र अनुरोध गर्दछु, बानी फेरौं। नयाँ बानी पारौं ।
११) त्यो तारा मात्रै हैन, जुन पनि झारी दिउँला
नेपालमा पानीजहाज, जल परिवहन र रेल यातायातको चर्चा गर्दा ‘यस्तो पनि भन्ने’ जस्ता प्रश्न उठे। हवाइजहाजले यस धर्तीलाई परिक्रमा गरेको गर्‍यै छ। समुद्रमा जहाज कुदेको कुदै छ, नदीहरूको बाटो हुँदै तिनीहरूले फन्को मारी नै रहेका छन्। हामी पनि चलाऊँ न भन्दा सपना मात्रै किन ठानिन्छ? के यी हाम्रा योजनाहरू, नारायण गोपाल–अरुणा लामाले गाएको गीत जस्तो– ‘… त्यो तारा मात्रै हैन, जुन पनि झारी दिउँला’ भने जस्तो हो र? भोलिबाट फेरि कसैलाई गिज्याउन मन लाग्ला र भनिएला– ‘पानी जहाज अड्डा खुलेछ, टिकट काट्न जाऔं कि ?’ म पनि ठट्टा गरौं? ‘त्यो टिकट काट्ने अड्डा हैन। नजानुस् । टिकट काटेर जहाज चढ्ने दिन पनि आउँछ। खवर मैं गरौंला ।’
१२) मुलुक ओरालो लागेको सन्देश सम्प्रेषण गरेर रमाउने!
हामी आफैँले नेतृत्व गरेको मौलिक प्रकृतिको शान्ति प्रक्रिया आधारभूत रूपमा टुङ्गिएको मैले स्मरण गराएँ। नेपालको यो अनुभव, द्वन्द्वमा फसेका मुलुकहरूका लागि अनुकरणीय सन्दर्भ हुनसक्ने विश्व जनमत रहेको मैले पाएँ । द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति प्रक्रिया, विशिष्ट प्रकृतिको निर्वाचन प्रणाली र अन्त्य भएको राजनीतिक संक्रमणकाल जस्ता प्रगति दुनियाँलाई आश्चर्य नै पार्ने प्रकृतिको मैले पाएँ । यसै विषयलाई लिएर उटपट्याङ् टिप्पणी गरियो, त्यो पनि पढ्न/लेख्न जान्ने, आफूलाई ‘ओपिनियन मेकर’ भन्न रुचाउनेहरूबाट। अघि बढिरहेको आफ्नो मुलुक ओरालो लागेको र स्वाधीन देश परनिर्भर रहेको सन्देश सम्प्रेषण गरेर रमाउने यस्तो प्रवृत्ति देख्दा दुःख लाग्छ ।
१३) ६ महिनामा आर्थिक वृद्धि ६.७ प्रतिशत
समग्र आर्थिक क्षेत्रको अवस्थाले हामीलाई खिन्न तुल्याउँदैन। म आंकडा बोल्न रुचाउँदिन तर कतिपय तथ्यलाई मिथ्यको रूपमा बङ्याइएकोले विगतमा उल्लेख गरिएका केही पक्ष यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठान्दछु। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आर्थिक वृद्धि ६.७ प्रतिशत छ। यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ। धेरैलाई आश्चर्य लाग्नेगरी यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा औसत महँगी ४.२ प्रतिशतमा सीमित छ। यहीँनेर ‘महँगी अचाक्ली बढ्यो। के यही दिन देख्न हामीले लोकतन्त्र ल्याएका थियौं ?’ जस्ता तर्क गर्नेसँग थोरै सम्वाद गर्न चाहन्छु। बेसाहा सस्तो छ, ज्यालाबाट ब्रम्हाण्ड नै किन्न सकिन्छ त म पनि कहाँ भनिरहेको छु र? तर तुलना त हिजो र आजको बीचमा हुनुपर्ने होला नि? तपाईंहरू नै भन्नुस् न त, अहिले औसत मुद्रास्फिति ४.२ प्रतिशत छ, गत साल कति थियो ? यो मुद्रास्फिति स्वभाविक सीमाभित्र छ कि छैन ?
१४) बाघ बढे, नेपाल पर्यटकीय गन्तव्य
बाघको संख्यामा वृद्धि भएपछि संसारका १५ प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा नेपाल पर्न सफल भएको छ।
१५) छातीमा हात राखेर आफैंलाई सोध्नुस्,जीवन कष्टकर हुने नकाम के के भए?
तपाईंहरूलाई नै विनम्र प्रश्न गर्ने अनुमति चाहन्छु– छातीमा हात राखेर आफैंलाई सोध्नुस्, पहिलेको तुलनामा तपाईंले चुन्नु भएको यो प्रधानमन्त्रीले सत्ता सम्हालेपछि तपाईंहरूको जीवन कष्टकर हुने नकाम के/के भए?
१६) बेरोजगार भत्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ, फेरि पनि केही हल्ला छ
काम पनि नभएका, रोजगारीको अवसर समेत नपाएकालाई सकेसम्म न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूत गर्ने, रोजगारी दिन नसके निश्चित मापदण्डका आधारमा बेरोजगार भत्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। फेरि पनि केही हल्ला त रहिरहने छ। यस्तो हल्ला गर्नेहरू रोजगार बिनाको रोजगारी र परिश्रम बिनाको पारिश्रमिक पाउने झुण्ड मात्रै हुन् ।
१७) म मुखमा पानी हालेर बोलिरहेको छैन
मैले घोषणा गरेको छु– ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ कसैले यसलाई भन्नको लागि भनेको ठानेको छ भने त्यसले गल्ती गर्दैछ। बुझे हुन्छ– भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा म मुखमा पानी हालेर बोलिरहेको छैन। अहिले सुशासनका संयन्त्रहरू क्रियाशील भएका छन्। हिजो भ्रष्टाचार गर्नेहरू आज क्रुद्ध छन्। भ्रष्टाचार गर्न तम्सिनेहरू तर्सिएका छन्। कसरी भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भनेर दुलो गौंडा चाहर्नेहरू मुर्मुरिएका छन्। अनौठो लाग्छ, तिनै व्यक्तिहरू देशमा सुशासन भएन भन्दै मिडियामा झुल्किन्छन्।
१८) महत्वाकांक्षा उच्च, डेलिभरी सुस्त भयो
महत्वाकांक्षा उच्च, डेलिभरी सुस्त भयो, विकासको हल्ला भयो– अविकास हात लाग्यो, प्रतिलोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा यो सरकार सहायक भयो जस्ता भूमिबिनाको आरोप र टिप्पणी पनि नसुनिएको हैन। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु– नेपाल बन्छ, बनाउनै पर्छ। हो, हरेक चिजको आयु हुन्छ। समयको सीमा हुन्छ। मान्छेको ज्ञानको सीमा छ। सामर्थ्यको पनि सीमा हुन्छ। तर मैले भन्दै आएको छु– इमानको कुनै सीमा हुन्न। निष्ठाको कुनै निर्धारित आयु छैन। इमान र निष्ठाका साथ काम गर्न कसैलाई कुनै अतिरिक्त प्रशिक्षणको पनि खाँचो पर्दैन।
१९) हाम्रा चुनौती को/को हुन् भन्ने थाहा छ
हामी आर्थिक स्थायित्वतिर अग्रसर छौं। हाम्रा चुनौती के/के हुन् मात्र होइन को/को हुन् भन्ने पनि हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ। कतिलाई यही स्थायित्व अभिसाप बनेको हुनसक्छ। त्यसैले राजनीतिक स्थायित्वलाई तेजबोध गर्न कृतिम घटना सिर्जना गर्ने र त्यसैका आधारमा सामाजिक अराजकता फैलाउन उद्यत छन्। समृद्ध नेपाल निर्माणको यस तुफानी अभियानमा इमान र निष्ठाको सहाराले अवरोध भत्काउँदै आएका छौं, र तोड्दै जानेछौं पनि।
२०) हामीले देख्ने सपना अर्कै हुनेछ
सरकार निष्ठापूर्वक काम गर्दैछ। यो वर्ष हामीले आधार खडा गरेको छौं। आउँदा वर्षहरू उपलव्धिका वर्षहरू हुनेछन्। पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर अर्को आम निर्वाचनमा जाँदा घोषणपत्रमार्फत् हामीले व्यक्त गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्‍यौं है भन्नेछौं। त्यतिबेला तपाईं हामीले देख्ने सपना अर्कै हुनेछ।
२ फाल्गुन २०७५, बिहीबार १९:०० प्रकाशित